Sidee U Falcelisa Markad xanaaqsantahay ? BARRO 4 SIROOD OO MUHIIM KUU AH - Buzuri texts
Qoraal Cusub, Travel
Sida aad u falceliso kolka aad xanaaqdo ayey cilmibaareyaashu sheegeen in ay caddeyneyso habdhaqankaaga iyo dabeecadaha gaarka kuu ah.
Xanaaqu waa shucuur aan muujinno maalinba maalinta ka dambeysa. Xaaladaha qaar waxa la sheegaa in xanaaqa la maareyn karo haddiiba ay qofka ka go’an tahay. Raadadka saameynta leh ee xanaaqu nooga tago ayaa ah: dareen qanacsanaan la’aan ah, isfaham la’aan, gef, iyo sidoo kale niyadjab laga qoomameeyo. Haddaba, aynu gudagalno falcelinnada ay dadku muujiyaan kolka ay caroodaan, iyo xogaha aqoomeysan ee laga qoray, kuwaas oo fasiraad guud ka bixinaya dabciga qofka.
Dadka qaarkood haddii ay si qallafsan u hadlaan oo ay qeyliyaan marka ay xanaaqaan, waxay ka dhigan tahay oo ay aaminsan yihiin in aan la fahmin, iyagoo u mooda in qofka kale si kas ah isu moogeysiinayo waxa gubaya ee ka careysiiyey. Mararka qaar, dadka sidan u dhaqma waxay qofka kale ku qasbaan inuu ogaado waxa maskaxdooda ka guuxaya ee uurkoodu rabo, waana mid ka mid ah sababaha keenaya in caradoodu qeylo isu beddesho oo ay joogto noqoto.
2. Murugo Iyo Aamusnaan
Waxaa jira dad farokutiris ah oo aamusnaan muujiya kolka ay caroodaan, waxayna ka walwalaan in ay xaaladdooda ka hadlaan iyaga oo ka baqaya in ay ka dhibaan dadka ay aadka u jecel yihiin ee ay ilaashadaan, ama sabab ka xiriirra in la fahmi waayo ayey u doortaan aamusnaanta.
Dadka aamusa kolka ay caroodaan waa kuwo ka baqaya in ay kali noqdaan, si ay u ilaashadaan dadka wehelka u ah ayeyna u muujin dhibtooda, waxayna moodayaan dareenka iyo waxa dhibaya oo ay soo bandhigaan in looga fogaanayo. Waa dad deyrada iyo cabashada neceb.
READ ALSO 6 Sababood Oo Gabadha Noocaan Ah Uu Nin Kasta U Rabo
Dadka qaarkood kolka ay caroodaan waxay ku kacaan falal qarbudaad ah. Mararka qaar waxay jabiyaan agabyo muhiim ah oo qiimo badan, xitaa waxa dhacda in ay sheygii u dhow ku tuuraan qofka ay u caroodaan. Carada noocan ah waxa muujiya dadka aaminsan in ay ka awood badan yihiin qofka ay u xanaaqaan, iyagoo is bida qabweyni joogto ah.
Dadka ooya marka ay xanaaqaan waa kuwo dareema in ay kali yihiin oo aysan helin wehelkii dhabta ahaa ee fahmi lahaa. Waxay dareenkooda muujiyaan iyagoo ilmeynaya, xitaa iyagoo awooda in ay qofka ka cadgoostaan. Waxay rumeysan yihiin in loola dhaqmo si aan qaddarin iyo caddaalad aheyn. Dad baa aaminsan oohinta xaaladaha qaar in ay taagyari tahay, laakiin aqoonbaareyaasha arrintan u kuurgalay waxay sheegeen in tani tahay dhabbaha ugu wanaagsan ee xiriirrada lagu badbaadiyo, halkii la qeylin lahaa ama qalalaaso la abuuri lahaa.
WQ/ Buzuri texts